China 11 IN 1 USB-C HUB Yakagadziridzwa Girazi neEthernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack fekitori nevatengesi | Huachuang Electronic
11 IN 1 USB-C HUB Yakaomeswa Girazi neEthernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
Chigadzirwa Chigadzirwa: 11 Mu1 USB-C Yakashatirwa Glass HUB
Model NO: G09
Zviteshi: Type C To PD 100W + 4K HDMI + Ethernet RJ45 + VGA + 3 * USB 3.0 + USB2.0 + SD / TF + 3.5mm Jack
Cable Kureba: 150mm
Kukura: 116 * 45 * 14mm
Chinyorwa: Aluminium kesi + Yakashatirwa Girazi + PC + TPE
1, 【HCET Technology】 Inopa 1 gore kudzorera / kutsiva waranti uye nehushamwari mutengi basa. Yakavakwa mune yepamusoro chip ine kuderera kwesimba kushandiswa, nekukurumidza kupisa dissipation uye yakakwirira yekufambisa dhijitori.
2, 【Kwekudzora Tembiricha technology Shandisa tekinoroji imwechete yekupisa senge MacBook Pro kuwedzera hupenyu hwekushanda uye kupa kwakanaka kuita. Ita kuti vachengeteke uye vavimbike kana makawanda achigara.
3, 【All-in-one USB C Hub】 Batanidza kune ichangoburwa MacBook Pro kana USB-C michina ine multiport USB-C hub ine chiteshi cheEthernet, USB C yekuchaja chiteshi nekutakura magetsi, chiteshi che4K HDMI, Anoverenga kadhi re SD. , muverengi weTF kadhi, 3.5mm Audio / mic 2-in-1 jack uye chiteshi cheVGA, 3 USB 3.0 Ports uye 1 USB 2.0 Ports, ichikubvumira kuti ubatanidze keyboard, mbeva, USB mutyairi, wekunze Disiki kuMacBook Pro.
4, 【Simba Dhirivhari Type USB Type C hub inodaidzira MacBook Pro yako kana zvimwe Type-C zvishandiso ipo ichibatanidza 100W yekuendesa magetsi port. Iye zvino mamwe akawanda mishini uye iyo nyowani Mac Pro kutsigira PD. Nekutumirwa kwemagetsi, chiteshi chimwechete che USB-C chinogona kukupa Blazing-nekukurumidza kuchaja chiitiko. Nenzira yakakodzera MacBook Pro.
5, 【Yakajeka 3D Mhedzisiro yeVhidhiyo Sync】 HDMI uye VGA port Rutsigiro inosvika 3840 * 2160 @ 30Hz uye 1920 * 1080p @ 60Hz resolution zvichiteerana. Iwe unogona kunakidzwa yakajeka 3D mhedzisiro vhidhiyo mune yakakwirira-resolution kubva kune yako USB-C komputa kune yekunze yekutarisa. HDMI port inotsigira hombe screen LCD TV kana kuratidza inoenderana ne 4K Max kubuda. Ipa iwe yakajeka 3D maitiro vhidhiyo Sync.
6, 【RJ45 1000M Ethernet Port & Yakagadzika Dhata Yekutumira】 Inotsigira 1000Mbps Gigabit RJ45 Ethernet port, kumashure inowirirana ne100Mbps / 10Mbps RJ45 LAN. 3 USB 3.0 maDoko ane 5Gbps danho rekushandura dhata uye 4.5W (5V / 900mA) Kubuda kweMagetsi. 1 USB 2.0 maPorts ari nani pane mbeva, keyboard kana mamwe madhigirii akadzika.
7, 【Ita kuti Hupenyu Hwako Hwakanaka】 Yakavakirwa mu SD uye TF slots yekuwana nyore mafaera kubva kune yose SD uye Micro SD Memory Card. Kumhanyisa kwakanyanya kusvika ku5Gpbs. Iyo 3.5mm Audio / mic 2-in-1 jack inoita kuti unakirwe nemumhanzi uchishandisa mahedhifoni kana vatauri.
8, 【Stylish Dhizaini, Premium Vaka uye Bhodhi Kuenderana】 Yakatsetseka uye yakakwenenzverwa yakarongedzwa ndege giredhi realumini yakavharirwa inoita kuti ive iyo yakakwanira yako Pro kutaridzika uye kunzwa muNew space Grey. Iyo yakakodzera USB-C yekuwedzera hub yeApple MacBook, Apple MacBook Pro, Apple I Mac / I Mac Pro (21.5 inch, 27 inch), Google Chrome bhuku Pixel, Dell, seUS, HP, Lenovo, uye mamwe akawanda Type Type laptops .
Tsigira PD87W Max inokurumidza kubhadharisa, yekuisa: 5V / 9V / 12V / 15V / 20.2V, 4.3A (yakanyanya), kuburitsa yakakwira 5V @ 1500mA
Kuendeswa kwedata kumhanyisa kusvika ku5Gbps Upamhi hwesimba kuburitsa 5V / 900mAh
3 * USB 3.0 Chiteshi
Dhipatimendi rekufambisa inomhanyisa kusvika ku5Gbps, Upamhi hwesimba remagetsi rinosvika 5V / 900mAh
Kuendeswa kwedata kunomhanyisa kusvika 480 Mbps, kutsigira USB2.0 kuendesa dhata, uye kunoenderana ne USB1.1
1 * SD kadhi kuverenga
Tsigira inosvika ku512 GB
1 * Micro SD kadhi kuverenga
2-chiteshi chezwi odhiyo, uye inotsigira yakazvimirira odhiyo kubuda (hapana chikonzero chekubatanidza HDMI uye VGA)
Apple MacBook, Apple MacBook Pro, Apple I Mac / I Mac Pro (21.5 inch, 27 inch), Google Chrome bhuku Pixel, Dell, seUS, HP, Lenovo, nemamwe akawanda Type Type laptops
QTY: zana zana
MARI: 38 * 30 * 36 CM
Yepfuura: 11 IN 1 USB-C Kudzvinyirira Station neEthernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, S, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
Inotevera: 11 IN 1 USB-C Multi-port Adapter ine Ethernet RJ 45, HDMII, 100 W PD, VGA, SD, TF, 3xUSB3.0, USB2.0 + 3.5mm Jack
dzakawanda usb c hub
yakatsamwa girazi HUB
usb c hub ine musoro wefoni jack
H13 4 IN 1 Type-C Kuti 3xUSB 3.0, 4K HDMI HUB
H11 Type C Kuti 4xUSB 3.0 HUB
S09P 3 IN 1 Type C Adapter ine 4K HDMI, PD100W ...
5 IN 1 Wireless TYPE C HUB ine HDMII, 100 W PD, ...
H12 5 IN 1 USB-C Kuti 3xUSB 3.0, SD, TF Kadhi Rear ...
T28 8 IN 2 Dual HDMI Type C HUB ine 2 x HDMI + ...